ဘဏ်အတိုးနှုန်းများပြောင်းလဲပြီးနောက် AGD ဘဏ်နှင့် AYA ဘဏ်တို့၏ အတိုးနှုန်းမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့်အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေအပေါ်ပေးသည့်အတိုးနှုန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ယခင်ပေးနေသည့်အတိုးနှုန်းထက် ၁ ဒဿ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပြီးနောက်တွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ အတိုးနှုန်းများပြင်ဆင်သတ်မှတ်လာပြီး ယခုအခါတွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအနက် AGD ဘဏ်နှင့် AYA ဘဏ်တို့၏ အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေသည်။ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၁၃ ခုတွင် AGD ဘဏ်နှင့် AYA ဘဏ်၏ အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့်အတိုးနှုန်းမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ AGD ဘဏ်က အပ်ငွေအပေါ်အတိုးနှုန်း ၆ ဒဿမ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် AYA ဘဏ်က အပ်ငွေအပေါ်အတိုးနှုန်း ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆ ဒဿ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပေးထားကြောင်း အဆိုပါဘဏ်များထံမှ သိရသည်။ ကျန်သည့်...
Coca-Cola was nearly 130 years old when it entered the Myanmar market in 2013 by partnering with local beverages company Pinya to form Coca Cola Pinya Beverages. Witha$223 million investment, the company employs 1,400 workers and produces more than 60 beverages at its two factories in Hlaing Thar...
Freight forwarding companies have to rest some of their trucks due to lower demands as trading activities at the Myanmar-China border trade gate have eased. Moreover, the goods to transport have also reduced while there are mounting difficulties in transportation. "If the Yangon-Muse trade route is working properly, out freight...
အစိုးရက ထုတ်ချေးသည့် ကျပ် (၁၀၀) ဘီလီယံ ချေးငွေကို ဧပြီ ၉ ရက်အထိ လျှောက်ထားနိုင်
Covid-19 ၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အစိုးရမှ ကျပ် ဘီလီယံ (၁၀၀) ထုတ်ချေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းကို ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ ဦးဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းကို ဧပြီ ၉ ရက်အထိ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ သိရသည်။ ယင်းသို့ ချေးငွေလျှောက်ထားရာတွင် Covid-19 ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းများကို ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပြီး အတိုးနှုန်းမှာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားကာ ချေးငွေသတ်တမ်းမှာ တစ်နှစ်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဧပြီ ၁ ရက်တွင် အဆိုပါချေးငွေလျှောက်ထားသူ စုစုပေါင်း (၅၀) ခန့်ရှိပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းသူ (၁၅၄) ဦးရှိကြောင်း ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ သိရသည်။ အဆိုပါ ချေးငွေကို အွန်လိုင်းဖြင့်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အွန်လိုင်းမှ ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းကို...